Google Earth dia nohavaozina miaraka amin'ny fanovana endrika sy Street View | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | fifaninanana
Google dia vao avy nanavao ny fampiharana Google Earth ho an'ny iOS, mifanentana amin'ny iPhone sy iPad. Anisan'ireo zava-baovao ilaina indrindra, misongadina ny fampidirana ny safidin'ny Street View, hahafahana mamakivaky ny arabe sahala amin'ny efa natao tao amin'ny Google Maps, sy ny fanovana estetika hafa ary ny fanatsarana ny fitadiavana lalana.
Raha mbola tsy nampiasa azy ianao dia mamela anao ny safidy Street View mandehandeha eny amin'ny arabe ary na ao anaty tranobe aza toa tsy eo ianao. Azonao atao ny manova ny fomba fijery, mihodina, mampiakatra ary mampihena, hahatratrarana ny zoro fijerena tadiavina ary hahafahanao mankafy ny antsipiriany kely indrindra ao amin'ilay faritra.
Ho fanampin'izany, nohatsaraina ny fiasa fikarohana, miaraka amin'ny fahazoana haingana ny fikarohana ataonao, ary ho azonao atao koa ny mahazo ny làlan'ny zotra an-tongotra, amin'ny bisikileta na amin'ny fitateram-bahoaka. Niova koa ny famolavolana ny fampiharana, mahatonga azy hifanaraka amin'ny rindranasa Google rehetra. Menio ambony misy ny hitsin-dàlana mankany amin'ny toerana misy anao ankehitriny, amin'ny fikarohana ary amin'ny bokotra menio, izay aseho avy amin'ny ankavia miaraka amin'ireo sosona samihafa ahafahantsika mampihetsika na mampiato.
Ny fampiharana dia mbola tsy manana katalaogin'ny sarintany 3D. Vitsy ny toerana ivelan'i Etazonia no manana an'io trangan-javatra io, zavatra izay ao aoriana lavitra any aoriana Sarintany IOS, izay ahitantsika sahady ny sarintany 3D an-tanàn-dehibe toa an'i Madrid, Barcelona na Paris, mba hametrahana ohatra amin'ny tanàna eropeana. Mifanohitra amin'izany, ny Maps dia tsy misy toa an'i Street View.
Ary koa, na dia tsy azoko antoka aza hoe olana izany satria mizaha toetra ny iOS 7 na Google Earth aho, ny fampiharana dia nikatona imbetsaka tao amin'ny iPad Mini noho ny tsy fahampian'ny fahatsiarovana, na eo aza ny multitasking tsy misy. Mila miandry hevitra bebe kokoa amin'ny mpampiasa hafa manana iOs 6 amin'ny fitaovana "voafetra" toa ny iPad Mini isika. Ao amin'ny iPhone 5 tsy nandalo ireo olana ireo aho. Tianay ho fantatra ny hevitr'ireo izay mizaha toetra azy amin'ny fitaovana samihafa sy amin'ny iOS samihafa. Ny fampiharana dia efa misy ao amin'ny App Store, ary maimaim-poana izany.
Fanazavana fanampiny - Apple dia manampy tanàna bebe kokoa amin'ny Maps Flyover: Paris
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Google Earth dia nohavaozina miaraka amin'ny fanovana endrika sy Street View
Annel dia hoy izy:
Tena tiako izany…. Manome anao ipad mini aho ary te-hivezivezy amin'ny arabe, saingy mahafinaritra ahy ny milaza fa tsy mahatadidy aho ary mbola manana fifandraisana Internet sy fampiharana mihidy:
Valiny tamin'i Annel
Gerry dia hoy izy:
Manana mini iPad amin'ny iOS 7 aho ary indrisy fa tsy azoko an-tsaina akory ilay fampandrenesana… ..tsy miresaka! Hiandry vahaolana amin'izany izahay …… Faly aho fa afaka mahita sy miasa miaraka amin'ny AutoCad, Sketchup, ary ireo fiasa sy fampiharana maro hafa…. Nisy zavatra tsy nety! ary tsy hahomby aho raha tsy rehefa manery ny fampiasana azy amin'ny fijerin'ny arabe ianao .. .. rehefa fantatrao ny vahaolana dia ampahafantaro ahy
Valiny tamin'i Gerry
iOS 7 dia mamela antsika hifehezana ny iPhone amin'ny fihetsiky ny loha